အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများထက် သာမန်ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ( အမျိုးအစား ၂ )ကူးစက်ခြင်းခံရရန် အခွင့်အလမ်း ၄ဆခန် ့ပိုများပါတယ်။ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင် လိင်အင်္ဂါရေယုန် ဖြစ်နိုင်ခြေပိုပါသလဲ??- လိင်အင်္ဂါတွင် ကိုယ်တွင်းမှထွက်သော အရည်များဖြင့်စိုစွတ်နေသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ပိုများခြင်း- အမျိုးသမီးများဓမ္မတာသွေးပေါ်ချိန်တွင်ဖြစ်သော ဟော်မုန်းအပြ...
အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော သားဥအိမ်ကင်ဆာ (၂)
သားဥအိမ်ကင်ဆာမှာ ထူးခြားတာက သားဥအိမ်မှာ ကင်ဆာစဖြစ်ပြီးမှ ဖြစ်တဲ့အတွက် စောစောစီးစီးသိဖို့က အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ အများစုက အသက် ၅၀ ကျော်လာမှ သားဥအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်တာကို သိရပါတယ်။ တချို့ပညာတတ် အမျိုးသမီးတွေ၊ ကျန်းမာရေး လေ့လာလိုက်စားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေက တစ်နှစ်တစ်ခါ ၊ ခြောက်လတစ်ခါ Medical Check up လုပ်ကြည့်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ကြည့်တော့မှ သားဥအိမ်မှာ အရည်အိတ်လေးတွေ၊ အခ...
on: 03 May, 2017
ဘီပိုးရှိတဲ့ မိခင်ကနေ ကလေးကို မကူးဖို့ နည်းသုံးနည်းနှင့် တားဆီးရပါမယ်။• ဘီပိုးရှိတဲ့ မိခင်ကို ကိုယ်ဝန် ၃၂ ပတ်ရောက်ရင် တင်နိုဖိုဗီယာ (Tenofovir) ဘီပိုးသေဆေးကို အနည်းဆုံး ကလေး အသက်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ တိုက်ရပါမယ်။ • နောက်ကာကွယ်ရေးတစ်နည်းကတော့ မွေးလာတဲ့ ကလေးကို ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ• ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရပါမယ်။• နောက်ပြီးတော့ ဘီပိုးသေဆေး Hepatitis B Immune Globulin...
ဒက်သည်ဦးရေပြားနှင့်ဆံပင်အရင်းပိုင်းတွင်dermatophytesဟုခေါ်သောမှိုစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။မူကြိုအရွယ်ကလေးများတွင်အဖြစ်များပြီး တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ အလွယ်တကူ ကူးစက်တတ်သောရောဂါဖြစ်သည်။ခေါင်းအုံး၊ဘီး၊မျက်နှာသုတ်ပဝါစသည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အတူတူအသုံးပြုလျှင်လည်း ကူးစက်တတ်ပါသည်။ပွေးရောဂါရှိနေသော ခွေးများ၊ကြောင်များမှတစ်ဆင့်လည်း ကူးစက်တတ်ပါသည်။ လက္ခဏာများအနေနဲ့ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊အကွက်များဖ...
on: 19 Apr, 2017
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်သည်။နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နမ်းရှုံ ့ခြင်း၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ မျှဝေသုံးစွဲခြင်း တို ့မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အသက်ရှုုလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်သည်။မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များ (မွေးစမှ အသက် ၁၈နှစ်အထိ )၊ အသက်အရွယ်ကြီးသ...
Anti HCV positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ....???
on: 12 Apr, 2017
လူတစ်ယောက်ဟာသွေးစစ်လိုက်လို့ anti-HCV positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ငါတော့ စီပိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ် ချောက်ချားကုန်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ anti HCV positive ဆိုတာ စီပိုးရှိတယ်လို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ က စီပိုးဝင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ HCV RNA ဆိုတာကမှ စီပိုးပါ။ အဲဒါကြောင့် Anti-HCV positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင် စီပိုးရှိမရှိ HCV RNA လို့ခေါ်တဲ့ စီပိုးအကောင်အရေအတွက်က...
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး (HBV) နှင့်ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေသော အယူအဆများ
on: 05 Apr, 2017
ဘီပိုးရှိရင် အချို့ကကုစရာမလိုဘူး ၊ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး လို့ပြောကြတယ်။ အချို့ကျပြန်တော့လဲ ဘီပိုးရှိရင်တစ်သက်လုံး ကုမရတော့ဘူး ကျွန်တော်/မတို့ ဘယ်လောက်ထိနေနိုင်မလဲ ဘယ်တော့သေရမှာလဲ မေးတတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုတွေခဏခဏအမေးများတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုပြောတာတွေက တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူးအခုခေတ်မှာ ဘီပိုးကိုလုံးဝပျောက်အောင် သေစေတဲ့၊ ကုတဲ့ဆေးတွေ အများကြီးပေါ်နေပါပြီစားဆေးလဲရှိတယ်။ ထိုးဆေးလဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဘီ...
on: 29 Mar, 2017
တီဘီရောဂါဆိုရင် လူကြီးလူငယ်မရွေး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တီဘီရောဂါစွဲကပ်ခံရသည့် လူနာသည် တီဘီဆေးကို အနည်းဆုံး (၆) လခန့် အချိန်မှန်မှန်နှင့် တိတိကျကျ သောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှန်မှန် သောက်လျှင် ရောဂါလုံးဝအရှင်း ပျောက်နိုင်တယ်။ တီဘီကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရမှု မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ဆေးမှန်မှန်မသောက်ဘူး။ (၂) လ လောက်သောက်ပြီရင် လက္ခဏာတွေ မရှိတော့ရင် ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ဆေးဖြတ်တယ်။ ဒါတွေကြေ...
တုပ်ကွေးရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းနှင့် အဆုတ်စသည် အသက်ရှူစနစ်ကို ထိခိုက်စေသည်။ အများအားဖြင့် အထူးတလည် ကုသရန် မလိုအပ်ဘဲ သူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းကြသည်။ လက္ခဏာများ တုပ်ကွေးရောဂါ၏ လက္ခဏာများမှာ အအေးမိဖျားနာ (Common Cold) နှင့် ဆင်တူပြီး - နှာစေးခြင်း - နှာချေခြင်း - လည်ခ...
ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆ အမှားများ
ငှက်ဖျားရောဂါသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနှုန်း များလျက်ရှိသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆ အမှားများစွာ တွေ့ရသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါသည် စိမ့်စမ်းရေ သောက်၍ သို့မဟုတ် ချိုး၍ ဖြစ်သည် ဟူသော အယူအဆမှာ ယနေ့အချိန်အထိ လူတော်တော်များများ လက်ခံယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်တတ်သော ဒေသသို့ သွားမည်ဆိုလျှင် အနေအထိုင်အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ။ စိမ့်စမ်းရေ မသောက်ပါနှင့်၊ စိ...